Kdenlive Kutaura kune Chinyorwa Chinyorwa. Ichi ndicho chiitiko changu | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rapfuura, Pablinux akakuudza nezve vhezheni itsva yeKdenlive, vhidhiyo yekugadzirisa chishandiso kubva kuiyo KDE chirongwa. Sezvo ini ndakambotaura, ini ndinofarira OpenShot iyo ine yakadzika yekudzidza curve, asiSezvo ini ndaifarira kwazvo izwi-kune-zvinyorwa chishandiso icho ichi chitsva vhezheni chinosanganisira, ndakafunga kutarisa.
Kunyangwe ini ndanyora kota yangu yezvinyorwa pane dzimwe nzira dzeLinux kune izvi kana kuti chirongwa cheWindows (Hapana munhu anogona kuzvidaidza kuti blogger yeLinux kana vasina kunyora imwe yeaya), iyi haisi nzira yandinofarira. Ini ndinofunga kuti zvirongwa zvinofanirwa kutaurwa nezvazvo nehunhu hwavo. Kana ndichifanirwa kutsanangura Kdenlive munzira ipi neipi, ini ndichati iri vhidhiyo mupepeti wevanozvivaraidza avo vanoda kuti zvisikwa zvavo zvioneke sehunyanzvi.
Ndakambotaura kare uye ndinozvichengeta (huya rimwe nerimwe) izvo yemahara uye yakavhurwa sosi software ine maraibhurari e multimedia basa rinoita kuti Adobe neBlackmagic zvigadzirwa zvioneke sematoyiwo zvawo. Dambudziko hombe nderekuti hapana munhu aifarira kuisa maturusi aya pamwe neakareruka uye anoyevedza interface uye akazara uye ari nyore kunzwisisa zvinyorwa. Kunyangwe Kdenlive iri kure nekuzadzisa chinangwa chayo, vagadziri vayo vari munzira chaiyo.
Muchiitiko chekukwanisa kushandura kutaura kuita zvinyorwa, Kdenlive inoshandisa maturusi maviri kubva ku arsenal ye repository yeiyo Python Package Index.
Vosk ndeye yakavhurwa sosi uye isingawanikwe kutaura kutaura toolkitn. Inopa mhando dzekucherechedzwa kwekutaura kwemitauro gumi nemitanhatu nemitauro: Chirungu, chiNgezi Chirungu, ChiGerman, ChiFrench, ChiSpanish, ChiPutukezi, ChiChinese, ChiRussian, ChiTurkish, chiVietnamese, chiItari, chiDutch, chiCatalan, chiArabic, chiGreek, chiFarsi, chiPhilippines.
Kdenlive inoshandisa Vosk mhando kuburikidza nemodule yakanyorwa muPython.
Nekudaro, kuve nerunyoro hakuna kukwana. Iwe zvakare unofanirwa kuenzanisa pamwe nevhidhiyo. Kune izvi tinoda imwe module muPython yekugadzira zvinyorwa zvidiki.
Kdenlive ichaongorora kuti une aya ma module akaiswa. PKuti uite izvi unofanirwa kutanga waisa iyo python3-pombi package pane yako kugovera wobva wamhanya iyo mirairo:
Tevere, isu tinofanirwa kuisa iwo manzwi ezwi. Kune izvi isu tinovhura Kdenlive uye tiri kuenda Zvirongwa Gadzira Kdenlive Kutaura kune Zvinyorwa.
Kuti utakure mamodheru une sarudzo mbiri: kana kurodha pasi mamodheru kubva peji ino uye uzviise pamurume (Unofanira kutanga watarisa Custom modem folders bhokisi) kana kunama chinongedzo kubva pane icho chinyorwa chinokuratidza iro iro peji.
Uchishandisa iyo Yekutaura kune Chinyorwa chishandiso
Ita shuwa mune iyo yekutarisa menyu iyo iwe une zvinyorwa zvidiki zvakasarudzwa. Tevere, isa vhidhiyo yaunoda kunyora.
Fambisa iyo vhidhiyo kune yekutanga vhidhiyo track uye slide iwo bhuruu mutsetse pamwe neyako nguva yaunoda kunyora.
Dzvanya pane zvinyorwa zvidiki uyezve pachiratidzo +
Zano rinowedzerwa kumusoro. Dzvanya pikicha kuruboshwe kweziso.
Sarudza iyo transcript modhi uye kana iwe uchida kunyora chikamu, zvese clip mune yakatarwa nguva kana chikamu chenguva yenguva. Dzvanya paProcess
Ini ndakafananidza Kutaura kuhunyanzvi kune yemahara vhezheni yegore chishandiso, uye ndaona anozvitora-mavhidhiyo mavhidhiyo kubva kuYouTube uye akabhadhara mapuratifomu ekosi. Ndinofanira kutaura kuti haina kukwana, asi haina kuipa kupfuura dzimwe nzira dzataurwa. Ane matambudziko kana avo vanotaura vasina diction rakanaka kana kudaro pamimhanzi kana imwe ruzha. Asi, vachifungidzira iwo mubvunzo wavari kundibvunza, hongu, unogona kushandiswa kudzikisa nhevedzano kana bhaisikopo. Kunyangwe, nekuda kwekukanganisa kwakaratidzirwa, vangangofanirwa kupedziswa neruoko.
Uye, kana vakomana veKdenlive vakaisa mabhatiri zvishoma uye vachibatanidza dudziro module, chinhu chacho chingave chakakwana.
Pane chimwe chinhu chinogona kuvandudzwa. Nhasi, kana iwe uchida kuchinja chitarisiko chemavara, iwe uchafanirwa kuisa kodhi. Uye, hapana nzira yekuvatengesa kunze. Iwe uchazongokwanisa chete kuvaona vakapinda muvhidhiyo.
Asi, sezvandambotaura pamusoro, pasina mubvunzo chirongwa chiri munzira chaiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Kdenlive's Kutaura-kune-Chinyorwa Turu Ichi ndicho chiitiko changu